Saddexda codsi ee ugufiican ee wax looga beddelo codka ku saabsan Android | Androidsis
ka taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada ayaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya. Marka waxaan haynaa waxyaabo badan oo la heli karo waqti ka dib. Waxyaabo badan iyo inbadan ayaa lagu qaban karaa iyaga mahadsanid. Hawlaha waagii hore loo hayn jiray kumbuyuutarkaaga. Sidee u noqon kartaa in codka la saxo. Hadda waa waxaan ku sameyn karnaa qalabkeena Android.
Si fudud adoo adeegsanaya codsi waa suurtagal in wax laga beddelo codka aaladdayada 'Android'. Markaa xaalado badan uma baahnin kumbuyuutarka si uu howshan u fuliyo. Ma rabtaa inaad ogaato barnaamijyadan?
Kadib waanu kaa tagaynaa oo aan ku soo uruurinay codsiyada ugu fiican ee wax looga beddelayo codka. Dhamaantood waa la heli karaa si toos ah loogu soo dejisan karo taleefankeena Android. Sidaas darteed haddii aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho codka, kuwani waa xulashooyinka ugu wanaagsan ee la heli karo:
1 Muusiga Studio Lite
2 Timbre: Goo, Ku Biir, Beddelo mp3
3 MixPad Muusikada Mashiinka Bilaashka ah
Muusiga Studio Lite
Lahaansho barnaamijku wuxuu ku dhawaaqaa inuu yahay midka ugu fiican Beertiisa. Wax gebi ahaanba qiil u leh, maadaama ay shaki la’aan tahay tan ugu wanaagsan ee loo heli karo aaladaha Android. Waxaan haynaa qalab duub codka, in kastoo aan duubi karno qalabka MIDI. Intaa waxaa sii dheer, waxaan haynaa taxane taxane ah oo aan ku qasinayno codka ama isle'egta wadada.
Sidoo kale waa in la ogaadaa in way fududahay in la isticmaalo. ka naqshaddu waa mid dareen leh, markaa waad khaldami kartaa markii ugu horeysay. Laakiin, way fududahay in lala qabsado adeegsiga arjiga. Wax shaki la'aan wax badan ka caawiya noocyadan codsiyada ah.
Es codsi aad u dhameystiran. Waxaan leenahay mid nooca bilaashka ah iyo nooca la bixiyay. Nooca bilaashka ahi wuu ka badan yahay intaas, in kastoo haddii aad khubaro tahay, nooca la bixiyay uu ku jiro taxane hawlo dheeri ah oo xiiso leh. The waad soo dejisan kartaa hoos:
Timbre: Goo, Ku Biir, Beddelo mp3
Magaca codsigan ayaa laga yaabaa inuu kuu muuqdo mid aad aqoon u leedahay, maadaama dhowaan loo magacaabay mid ka mid ah ugu hal abuurnimada Google. Marka waxaan haysanaa ogolaanshaha shirkadda. Waa a Xulashada ugu dhameystiran uguna hufan marka ay timaado wax ka beddelka codka ku saabsan Android. Waxaa macquul ah ikhtiyaarka ugu fiican ee hadda la heli karo.
Tuur maxaa yeelay waxay na siisaa hawlo badan kala duwan Karaa wax ka beddel codka hab aasaasi ah (jar, dhaji, ku biir, isku dar ...) laakiin waxaan sidoo kale cbadalo feylasha qaabab kala duwan. Intaa waxaa dheer, waxaan u beddeli karnaa qoraalka maqalka ama wax ka beddeli karnaa heerarka horumarsan sida xawaaraha ciyaarta. Marka waa ikhtiyaar aad u dhameystiran. Intaa waxaa dheer, waa in la yiraahdaa taas isku xirnaanta waxay u taagan tahay inay tahay mid dareen leh. Marka isticmaalayaasha aqoonta yar ee aaggan kuma lahaan doonaan dhibaatooyin badan isticmaalkiisa.
La degsado codsigan ee Android waa lacag la'aan. In kastoo, si aan u helno howlaha horumarsan qaarkood waa inaan bixinno. Laakiin, runti maahan daruuri, maadaama aan hayno hawlo badan oo horeyba loo heli jiray.
Timbre: Goo, Ku Biir, Beddelo mp3, mp4
MixPad Muusikada Mashiinka Bilaashka ah
Waa ikhtiyaar kale oo weyn, inkasta oo ay u taagan tahay inuu noqdo midka ugu adag saddexda. Marka waa ikhtiyaar hadaan rabno inaan fulino a tafatirka maqalka oo aad u badan. Gaar ahaan waa ku habboon tahay haddii aad jeceshahay inaad ku shaqeyso duubitaanno leh wadooyin kala duwan. Intaa waxaa dheer, waa in la sheegaa in isku xirnaanta arjiga uusan wax badan ka caawinayn kiiskan. Sida wuxuu leeyahay naqshad aan macquul ahayn, sidaa darteed ma fududa in la isticmaalo.
Laakiin, wuxuu ku kasbadaa iyada oo leh a xulashada ballaaran ee howlaha la heli karo isku mid ah Waxaan haynaa duubis fara badan, qalab loogu talagalay isu dhigma iyo isku darka. Intaa waxaa dheer in saameyn lagu yeesho waddooyinka. Waxaan mar labaad haysannaa nooc bilaash ah ama lacag leh. Gudaha lacagta la bixiyay waxaan helnaa dhammaan shaqooyinka la heli karo.
Marka midkee xulashada adiga ayaa iska leh. Haa Ma waxaad raadineysaa codsi aad wax uga beddesho codka ku jira Android-ka ee ah kan ugu xirfadda badan, dooro mid bixinta. Laakiin, haddii aadan u baahnayn waxyaabo badan oo ka mid ah astaamaha, nooca bilaashka ah wuxuu si fiican u shaqeeyaa. Waxaad kala soo bixi kartaa arjiga hoos.
MixPad, fiicni iskudhaf ah
Tani waa xulashadeena oo leh codsiyada ugufiican ee wax looga beddelo codka ku saabsan Android. Mid kasta oo iyaga ka mid ahi wuxuu u taagan yahay inuu yeesho faa'iidooyinkiisa iyo waxyeellooyinkiisa. Waa inaad tixgelisaa waxaad rabto inaad u adeegsato arjiga kahor intaadan mid dooran. Maaddaama ay jiri karto mid aad ugu habboon oo kuxiran waxaad u baahan tahay. Sideed u aragtaa barnaamijyadan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Barnaamijyada ugufiican ee wax looga beddelo codka ku saabsan Android